Aros Energy declarations ịchụpụ tenants | Holmbygden.se
Ihe na 26 November, 2013 site Holmbygden.se
Aros Energy declarations rụchara tenants maka Missions Review Report akụkọ. Anọchitekwa anya nke ụlọ ọrụ na-enye ndị Migration Board si mgbapu ulo Ịpị nke Östersundsposten, ma ọ dịghị onye chọrọ ịza ajụjụ.
Mgbe Aros Energy asambodo ikpeazụ spring zitere ya obi na ndị Ọrụ Immigrashọn maka mgbapu ulo, n'etiti ndị ọzọ. a. Holm Tobo n'èzí Uppsala mere ya na ụlọ na-ama na-ndị dị ndụ. N'oge okpomọkụ, agbalịwo na-tenants na Holm dị iche iche. Ugbu a na-agbalị ime otu ihe ahụ ala Tobo, ọ bụ ezie na tenants nwere contracts na nri ịnọgide.
Ikpeazụ Wednesday bụ Ọrụ nyochaa a akụkọ na ọnọdụ ahụ nke tenants na Tobo nnọọ abuses na Aros Energideklarationers ụlọ. Michael Sterner ụlọ ọrụ na-ekwu na ihe omume na ha ga-amalite a mkparịta ụka, na-eme ka iji njehie. N'adịghị ka a ọma dialog akụkọ Arbetarbladet na Aros Energy declarations ugbu a kama chọrọ ịchụpụ tenants na Tobo. Tenants Association na-anọchi ugbu a na ndị bi 'n'akụkụ.
The usoro nke na-atụba ha tenants ghọtara site Holm. Marcus Hamberg onye bụ ọtụtụ nwe Aros Energy declarations ọbụna chụpụ ya kasị okenye tenant na Holm afọ ikpeazụ. Ọ bụ ezie na o bi n'ebe kemgbe obodo nwe onwunwe, ọ manyere site Marus Hambergs ụlọ ọrụ Fagerhyltan hapụ ụlọ ya na Holm. na nnọọ 20 ụbọchị, ọ ga-arahụ.
- m na-achọghị ime n'ihi na m bi ná ndụ m nile na Holm, o kwuru.
20/4 2012 ST: Nu töms husen i Holm Gụọ ihe banyere tenant onye chụpụrụ.
Östersundsposten nwekwara dere ụnyaahụ ọtụtụ isiokwu nke Aros Energy ndịa na ọzọ ụlọ ọrụ, Firma Tea Widéen. Na ọtụtụ ebe na ha gbara agbata obi-asị, abụọ ụlọ ọrụ chọrọ ọnụ ekwegasịrị maka mgbapu ulo. Dị ka ihe ndepụta kọrọ ma ụlọ ọrụ leases na omume nke Njirimara nke ha mgbapu ulo, n'agbanyeghị na ha dere na ha bụ ndị ndị nwe Swedish Migration Board.
Rip akpọ Migration Board na-arụ ọrụ Ndụmọdụ Kent Juhlén na-ajụ ma ọ bụrụ na o nwere ike ịhụ ya iju. – “ama, m na-eche. Ọ bụ na nke a a ụgha na nkwupụta”, ọ na-aza. Kent Juhlén kwuru na Migration Board investigates ụlọ ọrụ.
Rip nwekwara yiri mgbaaka elu Tea Widéen, ma mgbe ahụ, na-emegharị kama teas nwa pịa Karlsson si Bracke. A pịa Karlsson na ekwentị Bracke bụkwa kpọọ mmadụ maka Aros Energy ndịa na Bracke bụ naanị otu onye na pịa Karlsson.
Rip jụọ ma ọ bụrụ na ọ bụ ọ bụ pịa Karlsson Aros Energideklarationers obi.
- Ee e, ọ bụghị m, kwekọrọ pịa.
Olee otú ọ ga-abụ na ị na-eme nwere otu aha?
- m nwere ike ịza, Amaghị m ihe Aros Energy ndịa bụ na-adịghị aghọta ihe ị na-ekwu okwu banyere, kwuru pịa Karlsson.
Pịa Karlsson na mbụ nwe “Skandalhusen” na Holm Johan Stendahl nwere ọnụ tupu ihe mgbapu ulo na Hälsingland na ọkọdọ mechie site a asịrị, gụnyere-adịghị akwụ ụgwọ VAT na peerolu ụtụ isi.
Links ka isiokwu
20/11 SR P4 Uppland: Ulo na Skolvägen “Ị na-ahapụ ụlọ ndị ọzọ ma ọ bụ obere na-ebugharị” Ige Radio akụkọ banyere ụlọ, kọwara na ize ndụ ahụ ike.